Myanmar Military-NLD Government is VIOLATING the Article 18 of the United Nation’s Universal Declaration of Human Rights | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi
HomeMyanmar Military-NLD Government is VIOLATING the Article 18 of the United Nation’s Universal Declaration of Human Rights
Myanmar Military-NLD Government is VIOLATING the Article 18 of the United Nation’s Universal Declaration of Human Rights
June 4, 2017 June 4, 2017 drkokogyi
UDHR = United Nation’s Universal Declaration of Human Rights
The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) isadeclaration adopted by the United Nations General Assembly on 10 December 1948 at the Palais de Chaillot in Paris, France.
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေး ကြေညာစာတမ်း အချက် ၃၀။….
လူတိုင်းတွင် လွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်ကြံဆနိုင်ခွင့်၊ လွတ်လပ်စွာ ခံယူရပ်တည်နိုင်ခွင့်နှင့် လွတ်လပ်စွာသက်ဝင်ကိုးကွယ်နိုင်ခွင့်ရှိသည်။
အဆိုပါအခွင့်အရေးများ၌ မိမိကိုးကွယ်သည့် ဘာသာကို သို့တည်းမဟုတ် သက်ဝင်ယုံကြည်ချက်ကို လွတ်လပ်စွာပြောင်းလဲနိုင်ခွင့်ပါဝင်သည့် အပြင် မိမိတစ်ယောက်ချင်းဖြစ်စေ၊ အခြားသူများနှင့်စုပေါင်း၍ဖြစ်စေ၊ ပြည်သူအများရှေ့မှောက် တွင်သော်လည်းကောင်း၊ ရှေ့မှောက်တွင်မဟုတ် ဘဲသော်လည်းကောင်း၊ မိမိကိုးကွယ်သော ဘာသာကို သို့တည်းမဟုတ် သက်ဝင်ယုံကြည်ချက်ကို လွတ် လပ်စွာသင်ပြနိုင်ခွင့်၊ ၀တ်ပြုကိုးကွယ် နိုင်ခွင့်နှင့် ဆောက်တည်နိုင်ခွင့်တို့လည်း ပါဝင်သည်။
← Yangon authorities sue Muslims for praying in the street
Myanmar Muslims in Meiktila ordered by authorities not to pray in their private properties during Ramdan although most of the Masjids are sealed for four years →